Elevation Lab inopa BatteryPro, mutsva bhatiri pfungwa yeApple Watch | Ndinobva mac
Elevation Lab inopa BatteryPro, mutsva bhatiri pfungwa yeApple Watch
Yekusimudzira Lab Zvishandiso Kambani yaunza bhatiri nyowani yeiyo iPhone iyo panguva imwe chete iri yekuchaja base yeApple Watch saka nechinhu chimwe chete chekushandisa unogona recharge iyo iPhone, Apple Watch uye kunyange AirPods.
Icho chishongedzo chakakosha parwendo rurefu uye pane nguva dzatisingakwanise kuva ne plug inowanikwa kukwanisa kubatanidza maadapter ekumisazve iwo majaira.
Nezuro maemail akatanga kusvika kune vazhinji vateveri vechiratidzo, kusanganisira ini kuzivisa vashandisi kuti chigadzirwa chichatanga kutumira mumavhiki matatu, saka vanhu vanozviwana izvozvi vachave ne 20% dhisikaundi kunyora promo kodhi POWERUP panguva yekubhadhara.
Iyo nyeredzi chimiro cheiri bhatiri rekunze ndechekuti yaita iyo yakasimbiswa magineti charger yeApple Watch (MFi). Iyo ine inokwana 8000mAh uye sechibatanidza chiteshi tine USB 3.0 chiteshi uye micro USB yekuchaja zvakare. Nezve saizi yayo, yakafanana nehukuru hweiyo iPhone 7.
Pakupedzisira tsanangura izvo sezvaungaona mumifananidzo ine bhanhire rakasununguka iyo inobvumira iyo Apple Watch kuve yakanyatsogadziriswa uye kudzivirira kudonha. Kana iwe uchida kuziva rumwe ruzivo nezve ichi chigadzirwa, tinokukurudzira kuti ushanyire chinotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Elevation Lab inopa BatteryPro, mutsva bhatiri pfungwa yeApple Watch
Pedzisa ako mavhidhiyo anotarisa nyanzvi nekufambisa mapurojekiti ako kubva iMovie kuenda kuFinal Cut Pro X
Iyi ndiyo nyowani yeSurface Arc Mouse, yakaenzana neApple's Magic Mouse